Iindaba -Izisombululo zokutyala umoya kwishishini
Umzi-mveliso awuseyiyo i-superposition elula yemveliso kunye nokulungiswa kwamasebe kwingqikelelo yemveli, kodwa indawo ebanzi kubandakanya ulawulo, i-R & D, imveliso, ukugcinwa, ukuhanjiswa, ulwamkelo, iofisi, indawo yokutyela, ulungiselelo, indawo yokupaka kunye nezinye iindawo. Ke ngoko, ukujikeleza komoya kunye neemfuno zokuthuthuzela ziphezulu, ngoko ke iifektri ezininzi kunye neendibano zocweyo zokucoca ziya kusebenzisa i-air conditioning yezityalo, ukusombulula ezi ngxaki kunye nokwandisa ukusebenza kakuhle.
Indawo esihlala kuyo izele luthuli kunye neentsholongwane. Ezi microorganisms nazo zineemfuno eziphezulu zokusingqongileyo. Kumaziko amaninzi ophando lwe-microbial, inkqubo yokuhlanjululwa kwe-air conditioning yezityalo yezityalo ithandwa ngabaphandi. Ezi microorganisms zikho kuyo yonke indawo. Sisenokungeva nto ngamaxesha aqhelekileyo, kodwa xa umzimba wethu unezifo okanye iintlungu, iintsholongwane ezisemoyeni zinokubulala. Nangona kunjalo, zininzi izinto ezinokuthi zenziwe kuphela phantsi kwemeko yokungabikho kothuli kunye ne-aseptic. Ngokomzekelo, iiprojekthi zokucoca kufuneka zifake i-airconditioner yokucoca yamanqanaba angaphezu kwe-10000.
1. Iworkshop yefektri isisombululo se-air conditioning ephakathi: iyunithi ephezulu ye-centrifugal + iyunithi yekhoyili yefeni
2. Izinto eziluncedo kwiworkshop yefektri isisombululo se-air conditioning:
1. Ekubeni isityalo sineemfuno eziphezulu zomthamo wefriji, ukhuseleko, ukuthembeka kunye nokusebenza kakuhle kwamandla, kucetyiswa ukuba ukhethe i-high-efficiency unit ye-centrifugal okanye i-screw chiller;
2. Kwiifektri ezinkulu kunye neeworkshops, amandla okupholisa alahleka ngokukhawuleza, kwaye iindleko zokusebenza ziphezulu kakhulu. Kuyacetyiswa ukuba ukhethe isixhobo sokupholisa amanzi ngexabiso eliphantsi lokusebenza.
3. Iimeko kufuneka kuhlangatyezwane nazo sisisombululo se-air conditioning esisembindini weplanti:
1. Iyunithi ye-centrifugal igubungela indawo enkulu kwaye idinga ukulungiselela indawo ebanzi yokufakela.
2. Isityalo siya kunika indawo ethile yokubeka iikhabhinethi ezipholileyo zamanzi, kwaye kufuneka kubekho indawo eyaneleyo yokubuya komoya, kwaye indawo yesilingi ye-cold air duct iya kunikwa.
Ixesha lokuposa: Aug-02-2021